चितवनमा उन्नतजातको मकैको बिउ अभाव : हाइब्रिड मकै लगाउने तयारीमा किसान | Chitrawan Online
Home चितवन सेरोफेरो चितवनमा उन्नतजातको मकैको बिउ अभाव : हाइब्रिड मकै लगाउने तयारीमा किसान
चितवनमा उन्नतजातको मकैको बिउ अभाव : हाइब्रिड मकै लगाउने तयारीमा किसान
Posted By: Ramu Acharyaon: ९ फाल्गुन २०७७, आईतवार २१:०४ In: चितवन सेरोफेरो, मुख्य खबरNo Comments
चितवनः मकै लगाउने मौसममा बीउको अभाव भएको छ । हरियो घोगा र कुखुराको दानाका लागि उत्पादनको समयमै मकै बिक्री भएपछि बिउ अभाव भएको हो ।
कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरका योजना अधिकृत उमराज अर्यालका अनुसार बिउका लागि उत्पादन गर्ने मकैका उत्पादन गर्न अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया कृषकले झन्झटिलो मान्न थालेकाले बिउको अभाव भएको हो । उहाँका अनुसार जिल्लामा बिउको मागको ५० प्रतिशत पनि उपलब्ध छैन । जिल्लामा १३ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रफलमा वसन्ते (वर्षे) मकै लगाईदै आएको छ । जसका लागि ३६६ टन बिउ आवश्यक पर्दछ । जिल्लामा ५ हजार हेक्टरमा हिउँदै मकै लगाउने गरिन्छ ।
उन्नत जातको बिउ उत्पादन गर्नका लागि ३०० मिटर वरिपरि अर्काे जातको मकै लगाउँन मिल्दैनन । पोलिनेशनका कारण वरिपरि एउटै जातको मकै हुनुपर्ने अर्याल बनाउनु हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो “नजिकै अर्काे जात भएर क्रस भयो भने बिउ बन्न सक्दैन ।” बिउ मकै लगाउने जमिनको वरपरका किसान मिलेर मात्रै लगाउनु पर्ने समस्याका कारण पनि किसानले झन्झट मान्ने गरेको उहाँको भनाई छ ।
बिउका लागि उत्पादन गर्न झन्झटिलो हुने भए पनि तत्काल बिक्री गर्न सहज हुने गरेको छ । कृषकले कुखुराको दानाका लागि तत्कालै बिक्री गर्दा राम्रो मूल्य पाउने गरेका छन् । यस्तै घोगा बिक्री गर्दा समेत राम्रो आम्दानी हुने भएपछि ६ महिनासम्म बिउका लागि भण्डारण गर्न छाडेको अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लामा हिउँदे मकै ५ हजार हेक्टरमा २१ हजार मेट्रिकटन र बर्से मकै १३ हजार ३ सय हेक्टरमा ५१ हजार १ सय मेट्रिकटन उत्पादन हुने गरेको छ । अर्यालका अनुसार अहिले किसानहरु उन्नत जातको बिउ नपाए पछि हाइब्रिड मकै लगाउने तयारीमा लागेका छन् । जिल्लामा बिशेष गरी स्थानीय जातका मकै, रामपुर कम्पोजीट, अरुण २, रामपुर हाइव्रिड १० जातका मकैको बिउ प्रयोग हुँदै आएका छन् ।
अहिले जिल्लामानै उत्पादीत उन्नत जातको मकैको मूल बिउ किसानले पाउन नसक्दा किसानहरु चिन्तित बनेका हुन । उन्नत जातको बिउका लागि किसानले चर्को मूल्य तिर्दा समेत पाउन नसकेको गुनासो आउन थालेको उहाँले बताउनुभयो ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ६ गीतानगरको अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहरकारी संस्थाका अध्यक्ष ऋषि चापागाई मकैको बिउ पाउन कठिन भएको बताउनुहुन्छ । संस्थाले २ सय विगाह क्षेत्रफलमा मकै खेति गर्ने तयारी गरेको भन्दै उहाँले त्यसका लागि पर्याप्त बिउ पाउन नसकिएको बताउनुभयो । पशु पालन समेत गर्दै आएको सो संस्थाले अनुदान पाउने भएपछि कृषि ज्ञान केन्द्रसँग सहकार्य गरेर काम अघि बढाएको छ ।
केन्द्रका प्रमुख राजन ढकालका अनुसार उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा बिउको अभाव भएको बताउनुहुन्छ । बिउ भएका ठाउँमा मकैलाई खाद्यान्नमा प्रयोग गर्ने गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “पालिकाहरुले बिउमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम नराखेका कारण पनि समस्या भएको छ ।”
भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. २१ पार्वतीपुरका ओमश्री बिज बृद्धि कम्पनीका सञ्चालक चिरञ्जीवि पोखरेल उन्नत जातको बिउको अभाव भएको बताउनुहुन्छ । आफूले मूल बिउ डढेलधुरा पठाएको भए पनि बिउ भने नआएको बताउनुभयो । ३० टन बिउ आउने अपेक्षा गरेको भए पनि नआउँदा बिउको अभाव भएको उहाँको भनाई छ । कृषकले बिउ नै पाउन नसकेको पोखरेलले बताउनुभयो । यसबाट मकै उत्पादन प्रभावित हुने कृषकहरु बताउँछन् । उन्नत जातको स्वदेशी बिउ नपाएपछि महंगोमा विदेशी हाईब्रिड जात वा स्थानीय जातको मकै लगाउन कृषक बाध्य भएका छन् । सरकारी निकायबाट समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्ने कृषकको माग छ ।
जिल्लामा कुखुरा, गाई भैंसीको दाना उत्पादन गर्ने धेरै उद्योगहरु छन् । जसका कारण मकै उत्पादन हुने समयमा नै कृषकले राम्रो मूल्यमा सहजै बिक्री गर्न पाउँछन् । जसका कारण भण्डारण लगायतको झन्झटबाट समेत मुक्त हुने गर्दछन् । शहरका ठाउँठाउँमा हरियो मकै पोलेर बिक्री गर्ने प्रचलन पनि बढ्दै गएको छ । त्यस्तो व्यापारीले कृषकको खेतबाटै हरियो मकै उठाउने गर्दछन् ।